Dhiigitaanka dhalooyin caag ah oo madhan
Arbaco, 08 Abriil 2020 by Cristina Maria Sunea
Mashiinka boorsada lagu xiro
Mashiinka boorsadaani waa unug isku xidhan, oo ku habboon gadaasha loo xardhay. Waxay ka aqbashaa bacaha boorsada oo kor ayey ugu dhaqaaqdaa. Waxay leedahay boosas badan oo isugeyn. Waxa ku keydisaa shaqada iyo booska.
Published in Xidhmada bacda
Tag: boorsooyin, boorso xiran, meel badbaadin